Madaxweynaha AC Milan oo gaaray Milan
Sunday, March 24th, 2019 - 10:01:32
Saturday March 03, 2018 - 13:37:13 in Wararka by kubadbile news
Madaxweynaha Kooxda Kubadda Cagta ee AC Milan ayaa ka degay Garoonka diyaaradaha ee Malpensa airport ee Magaalada Milan si uu uga qeyb noqdo daawadayaasha kulanka xiisaha badan ee Milan Derby.
Li Yonghong, ayaa ka digay Milan waxaa uu doonayaa in uu marqaati ka noqdo kooxdiisa cusub ee la loodin la’yahay sanadkan ee AC Milan,taas oo berri oo Axad ah Garoonka Sansiro ku qaabileysa kooxda ay isku magaalada iyo Garoonkaba yihiin ee Inter Milan.
Ninkan waa markii saddexaad oo uu kulan darbi Milan ah u imanayo Magaaladaas markii ugu dambeysanay waxaa ay ahayd 27kii December sanadkii la soo dhaafay.
Kooxda Tababare Gattuso xilli ciyaareedkan inkasta oo ay ku billaabatay qaab ciyaareed aan fiicneyn haddana waxaad mooddaa in magacaabista Gatuuso lagu faa’idey iyada oo Sanadkan aan dhinaceeda dhulka la dhigin.
Milan ayaa sanado badan kaddib hal todobaad gudahii Kooxaha ka dhisan Caasimadda Roma isa dhigtay waxaana ay garaacday Kooxaha Lazio iyo Roma,iyada oo halyegyii hore ee Milan haddana tababaraha looga dhigay uu u muuqdo Nin Milan halkii lagu yaqaannay ku wada.
Milan waxaa ay Tartanka Europe League isku beegmeen Kooxda Arsenal,iyada oo farriin hanjabaad ah u dirtay Arsenal.